Isaya 62 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
62 Handizorambi ndisingaiti chinhu nokuda kweZiyoni,+ uye handizorambi ndakanyarara nokuda kweJerusarema+ kusvikira kururama kwaro kwabuda sokupenya,+ uye kuponeswa kwaro sezhenje romoto rinobvira.+ 2 “Zvino marudzi achaona kururama kwako,+ haiwa iwe mukadzi,+ uye madzimambo ose achaona kukudzwa kwako.+ Uchashevedzwa nezita idzva,+ richasarudzwa nomuromo waJehovha. 3 Uchava korona yorunako muruoko rwaJehovha,+ uye uchava ngowani youmambo muchanza chaMwari wako. 4 Hauzonzizve mukadzi akasiyiwa zvachose;+ uye nyika yako haizonzizve dongo;+ asi iwe uchanzi Mufaro Wangu Uri Maari,+ uye nyika yako ichanzi Mudzimai Womuridzi. Nokuti Jehovha achange akufarira, uye nyika yako ichava mudzimai womuridzi.+ 5 Nokuti jaya zvarinoroora mhandara kuti ive mudzimai waro, vanakomana vako vachakuroora kuti uve mudzimai.+ Mwari wako achakufarira,+ sokufarira mwenga kunoita muroori.+ 6 Haiwa Jerusarema, ndaisa varindi+ pamusoro pemasvingo ako. Ngavarege kunyarara zuva rose nousiku hwose, nguva dzose.+ “Imi muri kutaura nezvaJehovha,+ regai kunyarara,+ 7 musamuzorodza kusvikira arisimbisa zvakasimba, chokwadi kusvikira aita kuti Jerusarema rirumbidzwe munyika.”+ 8 Jehovha apika noruoko+ rwake rworudyi uye noruoko rwake rune simba+ achiti: “Handizopizve vavengi vako zviyo zvako kuti zvive zvokudya zvavo,+ uyewo vokune imwe nyika havazonwi waini yako itsva,+ yawakashandira zvakaoma. 9 Asi vaya vari kuzviunganidza ndivo vachazvidya, uye zvechokwadi vacharumbidza Jehovha; uye vaya vari kuiunganidza ndivo vachainwira muzvivanze zvangu zvitsvene.”+ 10 Budai, budai nepamagedhi. Gadzirai nzira yevanhu vacho.+ Umbiridzai, umbiridzai mugwagwa mukuru. Ubvisei matombo.+ Simudzirai marudzi chiratidzo.+ 11 Tarirai! Jehovha akaita kuti zvinzwike kumugumo wenyika+ achiti: “Itii, kumwanasikana weZiyoni,+ ‘Tarira! Ruponeso rwako ruri kuuya.+ Tarira! Iye ane mubayiro waanopa,+ uye mubhadharo waanopa uri pamberi pake.’”+ 12 Zvino vanhu vachavatumidza kuti vanhu vatsvene,+ vaya vakadzikinurwa naJehovha;+ asi iwe uchatumidzwa kuti Akatsvakwa, Guta Risina Kusiyiwa Zvachose.+